Mva nje: Yenza ngokuzenzekelayo, uzilungiselele kwaye wabelane ngeZinto eziHlaziyiweyo zeMithombo yeendaba kuLuntu usebenzisa i-AI kunye noMxholo okhoyo | Martech Zone
Mva nje: Yenza ngokuzenzekelayo, ulungiselele kwaye wabelane ngoHlaziyo lweMithombo yeendaba kuLuntu usebenzisa iAI kunye noMxholo okhoyo
NgoLwesibini, Meyi 11, 2021 NgoLwesibini, Meyi 11, 2021 Douglas Karr
Iinkqubo ezinkulu zosasazo lwentlalo ziqala ngomxholo omfutshane omfutshane onokuwukhupha kuwo onke amajelo akho kwaye ufumane wonke umntu kwinkampani yakho ukuba andise. Kulula ukuyenza kube kanye, kabini, nokuba kathathu. Kodwa ngamakhulu amawaka amawaka? Kulapho ke ubukrelekrele boluntu obungelolokwenyani bukunika amandla okuguqula nawuphi na umxholo wexesha elide ube yimikhosi yezithuba zemidiya yoluntu ukukala iinkqubo zakho zemidiya.
Mva nje iqonga lobukrelekrele boluntu ekuhlaleni liquka
Umbhali womxholo we-AI -Usele utyale imali kumxholo okwinqanaba eliphezulu okwangoku obambeke kwiividiyo, iipodcast, kunye namaxwebhu abhalwa ixesha elide. Umbhali woMxholo we-AI mva nje uza kungena kuwo nawuphi na umxholo wexesha elide kwaye akunike imiqolo yezithuba zemithombo yeendaba zentlalo ezivavanywe kwangaphambili ezilungele wena ukuba uziphonononge kwaye uzondle kwiinkqubo zakho zemidiya.
Social Media Marketing -Ngexesha lithile Isoftware yokuBhala yokuBhala ubhalela iiposti zakho zemidiya yoluntu, Mva nje ikunika yonke into oyifunayo ukuze uphonononge, uhlele, uvume, ucwangcise, kwaye upapashe imihlambi yezithuba zemidiya yoluntu kuwo onke amajelo akho. Ukuba unoxanduva lokuthengisa amajelo asekuhlaleni kwimimandla emininzi, iimveliso kunye neemveliso ke iiakhawunti zethu zomzali nomntwana zenza ukuba kube lula ukulawula yonke into endaweni enye.
KuThengiswa kweNtlalo -Ukuba inkqubo yakho yentengiso yemidiya yoluntu isebenza kakuhle, inyathelo elilandelayo kukuzisa abaphathi bakho kunye namaqela athengisa kwinkqubo yakho yokwandisa ubukho bakho kunye nomyalezo kwintengiso. Isisombululo sokuthengisa kwezentlalo mva nje siqinisekisa ukuba yonke iposti yemidiya yoluntu ihlala isemyalezo kwaye ivumela abasebenzi ukuba bathumele izithuba zemithombo yeendaba ezamkelweyo ngaphambili kumajelo abo. Okanye, ungasebenzisa eyethu akhawunti yomzali nomntwana ukupapasha umxholo wemidiya yoluntu egameni labasebenzi ukuze kungabikho mfuneko yokuba baphakamise umnwe.
Uhlalutyo lweendaba kwimidiya - Umxholo nguKumkanikazi kunye nomgangatho wayo yonke imicimbi yemidiya yoluntu. Mva nje uhlalutyo lweendaba zosasazo lwentlalo ukufikelela kunye nokuzibandakanya kuyo yonke iposti yemidiya yoluntu kwaye ikunika izindululo zokubandakanya kwizikhokelo zakho zokubhala.
Sisebenzisa mva nje ukukhulisa, ukusasaza, ukuvavanya, kunye nokuqokelela ingxelo kwithala leencwadi lethu levidiyo kwaye sibone ukufana okumangalisayo phakathi kwento eyenziwayo mva nje nge-AI njenge "xesha elinokucothwa" ngokuchasene neqela lethu elinokukhetha. Ukubanakho mva nje kokufunda kunye nokuchonga imeko ephambili kumajelo eendaba kwezentlalo kubalulekile kuye nakubani na ofuna ukukala imveliso yabo.
UMay Riu-Isicwangcisi seendaba seHlabathi, uVaynerMedia
Mva nje iqonga lobukrelekrele bokufakelwa lifunda rhoqo kwizithuba zakho zemithombo yeendaba zentlalo kunye nokwakha imodeli yokubhala esekwe kwinto ebandakanyeka kakhulu kubaphulaphuli bakho. Abathengi babona iziphumo ezintle zokwenyani… kubandakanya ukwanda kwe-12,000% kuthethathethwano, 245% ngaphezulu konqakrazo, kunye nama-200% ngaphezulu ekhokelayo.
Cela iDemo yakutshanje
tags: Umbhali womxholoIsoftware yokubhala umxholoiqongakukubhadla okungeyonyaniumxholo ozenzekelayozenzele imidiya yoluntuyenza ngokuzenzekelayo izithuba zentlalomva njeiqonga lobuntlolauhlalutyo kwimidiya yoluntuukuthengisa kwezentlalo